Boorama: Mudaaharaad Baaqday
Wasiirka Arrim. Gudaha Somalilad, Dr. Gaboose ayaa Boorama kula kulmay odayaal si uu ugala hadlo baajinta banaanbax horey u qorsheysnaa
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland, Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa magaalada Boorame kula kulmay odayaal-dhaqameed deegaanka ah si uu ugala hadlo mudaaharaad horey loo qorsheeyey. Mudaaharaadkaas oo baaqday ayaa wasiirku sheegay in odayadu ay cabasho qabeen.
Mar la weydiiyey inay cabashadoodu ku salaysneyd saamiga dadka gobolka Awdal kasoo jeeda laga siiyey xukuumadda cusub ee Somaliland iyo waliba beddel lagu sameeyey sarkaal deegaanka ah taasoo daba socotay dhacdadii bishan la sheegay in xoogag ONLF ka tirsani ay xeebaha galbeed ee Somaliland kasoo degeen, ayaa wasiirku ku jawaabay in haddii odayaashu ay dood ka qabaan arrinta la xiriirta saamiga xukuumadda in dawladdu ay diyaar u tahay inay ka dhageysato, wixii la isku afgartana la wadaagi doono. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in arrinta ONLF la xiriirta ay dawladdu waddo baaris ku saabsan wixii dhacay, isbeddelna laga yaabo in saraakiisha qaar lagu sameeyo.
Wasiirka waxa kale oo la weydiiyey in cabashada beesha ku salaysani ay aad usoo badatay intii xukuumadda cusubi ay xilka qabatay, taasoo aan ku ekay gobolka Awdal oo kaliya ee uu la wadaago gobolka Saaxil oo isna dhawaan cabasho usoo jeediyey dawladda, wasiirku waxa uu ku jawaabay in mid ka mid ah arrimaha keenaya cabashada ay tahay tirada yar ee xukuumadda oo keenaysa cabashooyinka dawladda loo soo jeedinayo.
Wareysiga oo dhameystiran, hoosta ka dhageyso.